Forum serasera malagasy Ho lany tarangana ny Sokatra malagasy - Dinika forum.serasera.org
Ho lany tarangana ny Sokatra malagasy
Fitohizan'ny hafatra : Ho lany tarangana ny Sokatra malagasy
soanja - 06/04/2010 02:11
Mampalahelo tokoa ny zavamisy fa dia 20 taona eo ho eo dia ho lany tarangana ny sokatra ilay mahazatra antsika fahita any Madagasikara. Izay no vaovao mivoaka momba an'i Madagasikara. Tato ho ato dia mirongatra tokoa ireo mpihaza azy ireo mba hivarotra ny henany any an-tsena, moa ny toerana tokony hisy azy dia efa lasantsika olombelona.
Atao ahoana fa dia tantara zany sisa no hitoetra amin'ny alalan'ny angano sy ny sary momba io biby iray mahatehotia io raha afaka zato taona.
sipagasy - 06/04/2010 14:57
ouups dia ahoana ny taranaka izany tsy hahalala intsony hoe itony no sokatra???? mmhhhh
soanja - 06/04/2010 17:32
Zany ve moa ho tarognina intsony aky. Isika aza ity tsy mba nahita intsony izany atao hoe "Elephant Bird "- izay tena mba heveriko fa isan'ny vorona tsy hisy intsony indroa aman-tany nanitsaka ny tany satria goavana be tokoa. Any aminay any Atsimo dia antsoina hoe "vorombe " ilay izy. Inona anefa tantara sisa napetrak'i Gasikara ho azy.
Lazao dieny mialoha ny papozy rehetra hoe tadidio nareo ity biby ity fa tsy hisy intsony izy ity hono ary aoka hapetraka ho lovatsofin'ny taranaka ny momba azy. Ndeha aho hamorona sahady angano ho azy ireo sao mba ho tian'ny taranaka ihany, ankoatr'ireo efa misy.
Ny tenako moa dia manana roa ao an-tranonay kanefa ireo toa tsy mba manatody mihitsy satria tsy haiko na lahy na vavy ry zareo. Niara nitombo tamiko izy ireo ary efa tena antitra dia antitra tokoa. Ho sary sisa zany no avela ho an'ny taranaka.
soanja - 06/10/2010 05:32
Izay vao tonga angazety ity fampahafantarana ity. Oviana izany ny Malagasy vao tena aharaka ny zavamisy?